बार्सिलोना: किन निराश भए मेसी?
अन्तर्राष्ट्रिय बार्सिलोना: किन निराश भए मेसी?
नाउ क्याम्पभित्र पहिलाकै जस्तो वातावरण पाउन नसक्दा मेसीले नयाँ सिजनमा नरहने मनस्थिति बनाएका हुन् । उनको सम्झौता पनि २०१९/२० सम्म मात्र हो
वार्षिक सम्झौता नवीकरण गर्ने समयमै मेसी आफूमाथि गरिएको व्यवहारकै कारण नाउ क्यापमा बस्न नचाहेको बुझिन्छ । यदि स्पेनिस रेडियो स्टेसन काडेना सेरको भनाइ मान्ने हो भने बार्सिलोनाका प्ले मेकर र कप्तान लियोनल मेसीले सम्झौता भंग गरिसकेका छन् ।
सिजन समाप्तिसँगै क्लबले चाहेका खेलाडीसँग सम्झौता गर्छ । नचाहने खेलाडीलाई अन्य क्लबमा बिक्री गर्छ । यद्यपि मेसीको हकमा बार्सिलोनाले स्पष्ट जवाफ दिएको अवस्था भने छैन ।
तर, मेसी स्वयंले नयाँ सिजनमा बार्सिलोनामा नरहने बताइसकेका छन् । बार्सिलोनाले चाहेर वा नचाहेर मेसीलाई बुढो बाघको संज्ञा दिन थालेको छ । बुढो बाघ मेसीबाट बार्सिलोनाले आउँदा दिनमा खासै उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा लिएको छैन ।
त्यही मेसीले पूरै करिअरमा बार्सिलोनालाई दर्जनौँ उपाधि दिलाउन सफल भएका छन् । भनिन्छ पनि कुनै वस्तु काम लाग्दासम्म सबैले प्रयोग गर्छन् । जब त्यो प्रयोग नै गर्न मिल्दैन, त्यसवेला सबैले फ्याँक्छन् वा मिल्काउँछन् ।
मेसीको हकमा यस्तै भएको भन्नुपर्ला । बार्सिलोनाले लगभग डेढ दशक मेसीलाई प्रयोग गऱ्याे । अब मेसी बुढो भइसकेको आभाष बार्सिलोनाले गरेकाे स्पेनिस मिडियाहरू दाबी गर्छन् ।
मेसी अब मेसीजस्तै नभएको बार्सिलोनाको बुझाइ छ । यद्यपि बार्सिलोनाले अझै पनि मेसी नाउ क्याम्पमै केही वर्ष रहुन् भनी नचाहेकोजस्तो देखाइभने रहेको छैन ।
तर, त्यो केवल देखाउन मात्र हो । भित्रि रूपमा बार्सिलोनाले मेसीको ‘रिप्लेसमेन्ट’ गर्न एक राम्रा खेलाडी भित्र्याउने योजना बनाएको छ ।
बार्सिलोनाबाट भन्ने र गर्नेजस्ता पक्ष दोहोरिँदा मेसी दुःखी छन् । कुनै समय आफ्नो पूरै फुटबल करिअर बार्सिलोनामै सकाउने घोषणा गर्ने मेसी स्वयं आजको दिनमा अन्यत्र जान चाहन्छन् ।
‘म मेरो करिअर बार्सिलोनामै सकाउनेछु,’ केही वर्षअघि मात्र मेसी यस्तो भन्थे, ‘म यो क्लबबाहेक अन्यत्र सोच्न नै सक्दिनँ ।’
युभेन्टसका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड छाड्दा मेसीलाई अन्य क्लबमा जान सुझाब दिएका थिए ।
मेसीलाई एकै क्लबमा करिअर समाप्त गर्नुभन्दा अरू क्लबमा पनि चुनौती सामना गर्नु रोनाल्डोले बताए । त्यसवेला पनि मेसीले बार्सिलोना नै एक र अन्तिम क्लब भनी प्रत्युत्तर दिए ।
दुई वर्षअघिसम्म पनि बार्सिलोना नै प्यारो लागेको मेसी २०२१ को सिजनमा नयाँ क्लबको खोजीमा छन् । फेरि केही वर्षयता बार्सिलोनाले मेरीलाई मैदानभित्र र बाहिर धेरै प्रयोग गरेको छ ।
प्रशिक्षकदेखि खेलाडी किन्नेसम्म कसैसँग सरसल्लाह नगरी नै बार्सिलोनाका अध्यक्षले एकल निर्णय गरिरहे । जसबाट मेसी मात्र नभएर अन्य खेलाडी पनि त्यति खुसी छैनन् ।
मेसीले कप्तानी जिम्मेवारी पाएपछि पूर्ण रूपले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
मेसी बार्सिलोनासँग दुःखी हुनुका तीन कारण मुख्य मानिएको छ । प्रशिक्षक परिवर्तन गर्ने, राम्रो दाम पाउँदा त्यत्तिकै राम्रा खेलाडी बिक्री गर्ने र परम्परागतभन्दा फरक शैलीमा खेल्ने रणनीति मेसीलाई पटक्कै मन परको छैन । पेप ग्वाओर्डिलापछि बार्सिलोनामा आधा दर्जन प्रशिक्षक बने ।
बारम्बार प्रशिक्षक परिवर्तनले मेसी दिक्क भएका देखिन्छन् । क्लबको सफलतामा प्रशिक्षकको भूमिका पनि मुख्य रहने गर्छ । तर, स्थिर प्रशिक्षक नरहँदा बार्सिलोनाको प्रदर्शन खस्किएको आभाष उनले गरेका छन् ।
कैयौँपटक मेसीले एक राम्रो प्रशिक्षक आवश्यक परेको म्यानेजमेन्टलाई बताए पनि । तर, म्यानेजमेन्ट मेसीको कुरा सुन्न तयार नै छैन ।
अर्काेतिर बार्सिलोनाले खेलाडी किनबेचमा पनि धेरै गल्ती गरेको मेसीको विश्लेषण छ । यसअघि खेलाडी भित्र्याउँदा म्यानेजमेन्ट र प्रशिक्षकले सिनियर खेलाडीसँग विचार लिन्थ्यो । केही वर्षयता यस्तो काम भइरहेको छैन ।
पूर्वप्रशिक्षक टाटा मारिन्टोलाई एक्कासि बर्खास्त गर्दा पनि मेसीले आपत्ति नजनाएका होइनन् । त्यसपछि आएका सेटिएनको प्रशिक्षण र योजनाबाट मेसी सन्तुष्ट छैनन् । सेटिएनको योजना बार्सिलोनाको परम्परागत शैलीभन्दा फरक भएको मेसी मान्छन् ।
प्रशिक्षक सेटिएनको रणनीतिअनुसार खेल्दा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा दबदबा राख्न नसक्ने मेसीले दाबी नै गरे । मैदानमा प्रशिक्षकको नीतिभदा खेलाडी बाहिर जान सक्दैनन् । तर, मेसीले धेरैपटक प्रशिक्षकको रणनीतिविरुद्ध नै फरक योजना बनाएर खेले गर्छन् ।
यसबाट के झल्किन्छ भने प्रशिक्षक र कप्तानबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन । जसले पछिल्ला समयमा बार्सिलोनाले नतिजा निकाल्न सकेन । बार्सिलोनाका प्रशिक्षकसँगको तनाव झेल्न नसक्दा मेसीले लगातार आधा दर्जन खेलमा गोल गर्न नै सकेनन् ।
उनले स्तर र आत्मविश्वास दुवै गुमाएका छन् । यद्यपि यसै साता मेसीले करिअरकै सात सय गोल गरे । तर, उनको खुसियालीमा त्यति दम देखिएन । अर्काे अर्थमा भन्दा मेसीले त्यो सफलता चुम्दा पनि खुलेर खुसी मनाउन सकेनन् ।
उनी आफ्नो कप्तानीमा बार्सिलोनालाई ला लिगा उपाधि दिलाउन चाहन्छन् । तर, पाँच खेलअघि चिरप्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडले चार अंकको अग्रता लिइसकेको छ ।
यो अवस्थाबाट हेर्दा उपाधि होडमा रियल निकै अगाडि बढेको छ । कप्तानीका रूपमा उपाधि रक्षा गर्न नसकिने हो कि भन्ने डर मेसीलाई छ ।
रेडियो स्टेसन काडेनाका अनुसार मेसीको चित्तदुखाइ नेमार जुनियरलाई पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीलाई बेच्नु नै थियो । प्रमुख स्ट्राइकरलाई पैसाको लोभमा बार्सिलोनाले पिएसजीलाई बेचेको आरोप मेसीको छ ।
विश्वकीर्तिमानी रूपमा नेमार पिएसजीमा गएपछि बार्सिलोनाको फिनिसिङ एकाएक कमजोर देखियो ।
नेमार, लुइस सुआरेज तथा मेसीबीचको त्रिकोणात्मक फिनिसिङ समन्वय युरोपकै शक्तिशाली मानिन्थ्यो । नेमार पेरिसमा जाँदा मेसी कैयौँ दिन टोलाएर बसेका थिए ।
रमाइलो पक्ष के छ भने मेसीले नेमारलाई पुनः बार्सिलोनामा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । फेरि बार्सिलोनाले पनि नेमार फर्किने विश्वास दिलाएको छ । क्लबका अध्यक्ष जोसेप मारियाले भनेका थिए, ‘हामी नेमार ल्याउने प्रयासमा छौँ ।’
मेसीले अध्यक्षकाे प्रतिबद्धतामा विश्वास गरिरहे । तर, उल्टै जोसेपले एटलेटिको म्याड्रिडबाट एन्टोनियो ग्रिजम्यानलाई भित्र्याए । जोसेपले आफूमाथि धोका गरेको मेसीको ठम्याइ छ । यतिवेला नै क्लबमा मेसीका सहकर्मी तथा पूर्वखेलाडी साबीलाई प्रशिक्षक बनाउने हल्ला छ ।
अब आफैँ विचार गर्नुस्, कुनै समयमा सँगै खेलेका साथी नै प्रशिक्षक बनेर क्लबमा आउँदा के हुन्छ ? यदि साबी प्रशिक्षक बने मेसीले उसले भनेका सबै निर्देशन मान्नुपर्छ । जुन कदापि मेसीलाई स्वीकार्य नहुन सक्छ ।
आफूअनुकूल केही नभएपछि मेसीले बार्सिलोना छाड्ने मन बनाएको स्पेनिस पत्रिका एल मार्काले जनाएको छ । एल मार्काका अनुसार मेसीले खेलपछि पूरै जीवन बार्सिलोना सहरमै बिताउने योजना बनाएका रहेछन् ।
क्लबले मेसीको पूरै परिवार ‘सेटल’ गराउने वाचा गरेको थियो । गत वर्ष मेसीले सम्झौता गर्दा ती कुरा उल्लेख भएनन् । सम्भवतः त्यसैवेला मेसीले आफूप्रति बार्सिलोनाको हेराई फरक पाए ।
गत शनिबार सेल्टा भिगोसँग २–२ को बराबरी नतिजापछि प्रशिक्षक सेटिएनले भने, ‘अब यसरी चल्दैन ।’ सीधासीधा रूपमा सेटिएनले मेसीप्रति नै इंगित गरेका हुन् ।
‘प्रमुख खेलाडीले मैदानमा आफनो स्तरअनुसार खेल्न नसक्दा नै नतिजा बराबरी भयो,’ सिनियर खेलाडीलाई दोष लगाउँदै सेटिएन भन्छन्, ‘हामी पुरानामाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ ।’
डेसिङ रुममा प्रशिक्षकको यस्तो तिखो शब्द सुनेपछि मेसीले आफूलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । सबैसँग सम्बन्ध पातलो भएपछि उनले आफ्ना बुबालाई सम्झौता तत्कालका लागि नगर्न निर्देशन दिए ।
यता चाइनिज सुपर लिग पनि मेसीप्रति आकर्षित छ । धेरैअघि नै चाइनिज सुपर लिगले मेसीलाई भनेको रकममा अनुबन्ध गरी ब्रान्डिङ गर्ने योजना बनाएको थियो ।
फेरि पनि बार्सिलोनमै रहने वा नहरने अन्तिम निर्णय मेसीकै हातमा छ । मेसी बार्सिलोनामा रहँदासम्म मुद्दा चलिरहनेछ । बार्सिलोना छाडेर अन्य राष्ट्रबाट फुटबल खेल्दा मेसी अदालती झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।
मेसीले बार्सिलोना छाड्ने समाचार आएपछि सम्भवतः धेरै क्लब खुसी छन् । ब्रिटिस मिडियाले मेसी म्यानचेस्टर सिटी वा युभेन्टस जान सक्छन् भनेको छ । म्यानेजमेन्ट र प्रशिक्षकसँग सम्बन्धमा तिक्तताभन्दा पनि मेसीले बार्सिलोना छाड्नुकाे प्रमुख कारण नै कर छलेको मुद्दाबाट बिदा हुनु हो ।
अहिले पनि बार्सिलोनाको अदालतमा मेसी र उनका बुबाको मुद्दा चलिरहेको छ । मेसीमाथि करोडौँ डलर कर छलेको आरोप छ । त्यही आरोप उनले खेपिरहेका छन् ।
त्यसबाट छुटकारा पाउन नै मेसी बार्सिलोना छाड्ने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।